SSR: Akụkọ nke apụl | Site na Linux
SSR: Akụkọ banyere apụl
jorgemanjarrezlerma | | Ndị ọzọ
Apple bụ otu n'ime ụdị ọrụ ụlọ ọrụ, nke dịka Microsoft n'oge ahụ, na-achịkwa ahịa ugbu a ma na-ekwupụta ọnọdụ dị n'ụzọ ụfọdụ. A na-akpọ ya asị ma na-asọpụrụ ya na ndị nke ikpeazụ na-enye òtù nzuzo dị ka ndị Taliban na-agbachitere eze na ntu. Ma, otu onye ga-ajụ, ọ bụ eziokwu na ndị kacha mara amara (Ọrụ) nke ndị guzobere Apple bụ ọgụgụ isi a na-akpọsa ebe niile? Ka anyị gaa n'akụkụ ahụ wee hụ nyocha nke ndị a.
Steve Paul Ọrụ: Nwa nwoke nke ụmụ akwụkwọ mahadum nyere ya maka nkuchi ezinụlọ nke Paul na Clara Jobs guzobere (nke Armenia sitere). Paul Jobs bụ onye na-anya ụgbọ oloko maka ụlọ ọrụ ụgbọ oloko na nne ya bụ nwunye ụlọ. Na 1961 ezinụlọ ahụ kwagara Mountain View n'ebe ndịda nke Palo Alto, nke ga-abụ otu n'ime ebe kachasị mkpa nke ụlọ ọrụ eletrọniki. Ọ gara ụlọ akwụkwọ elementrị nke Middle School na Homestead HS High School na Cupertino. Ọ sonyere na klọb Hewlett-Packard Explorer, ebe ndị injinia HP gosipụtara ndị na-eto eto ngwaahịa ọhụrụ ha, ebe Steve hụrụ kọmpụta mbụ ya mgbe ọ dị afọ 12.
N'otu oge, Jobs jụrụ onyeisi ụlọ ọrụ ahụ n'oge ahụ, bụ William Hewlett, banyere ụfọdụ akụkụ ọ chọrọ iji wuchaa ọrụ klaasị. Nke a mere ka ọ kwadoo W. Hewlett onye nyere ya ma nye ya ọrụ ịme oge ezumike na ụlọ ọrụ ya. A ga-emeri ọrụ dị ka ode akwụkwọ ọkọchị.
Stephen Woznick: A mụrụ ya n'ezinụlọ ndị si Bucovina kwabatara, nna ya nke Ukraine na nne ya nke German. Ndị nne na nna Stephen kwagara US mgbe agha ahụ bisịrị. Ejiri ụkpụrụ ezinụlọ Woz wee mee ka ọ sie ike karịa afọ ole na ole, echiche nke onwe ya, nkà ihe ọmụma omume, ụkpụrụ omume nke redio onye na-amu amu (inyere ndị mmadụ aka na mberede) na akwụkwọ (omume enyemaka nke Swift na ọrụ enyemaka) n'etiti ndị ọzọ.
Wozniak hụrụ ihe ọ bụla chọrọ ọtụtụ echiche n'anya mgbe niile, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na enweghị uru ọ bụla ma ọ bụ ahịa ọ bụla. Ọ mụtara ihe ndị bụ isi gbasara mgbakọ na mwepụ na kọmputa. Mgbe Woz dị afọ iri na otu, o wuru ụlọ ọrụ redio nke aka ya ma nweta ikikere mgbasa ozi. Mgbe ọ dị afọ iri na atọ, a họpụtara ya ịbụ onye isi oche nke ụlọ ọrụ elektrọnik nke ụlọ akwụkwọ ya, merie ihe nrite nke mbụ na ngosi sayensị maka onye mgbako dabeere na transistor. Nakwa na iri na atọ, Woz malitere ịmepụta kọmputa ya mbụ (gụnyere nke nwere ike ịkpọ tic-tac-toe), nke tọrọ ntọala maka ọganiihu ya.
Mgbe Woz na onye agbata obi ya, Bill Fernández hapụrụ Mahadum nke Colorado, ha wuru kọmputa ọnụ n’ebe a na-arụzi ụgbọala nke ndị mụrụ Fernández. N'ime oge a, Fernandez mere ka Woz mata ezigbo enyi ya na nwa klas ya, Steve Jobs, onye nwere oke ọchụnta ego nke ghọrọ enyi Woz ngwa ngwa wee malite ịrụ ọrụ.
Ronald wayne: Searchchọ ụgbụ ebe ahụ abụghị ihe gbasara akụkọ ndụ ya, yabụ anyị ga-eche na ọ bụ nwata nwoke America ka emepụtara ma gụọ akwụkwọ n'oge agha ahụ. Enwere ike ịsị na ọ bụ onye nke atọ amacha ama ama guzobere ụlọ ọrụ kọmputa Apple Computer. Ọ bụ ya gosipụtara akara ngosi Apple mbụ (eserese Isaac Newton n'okpuru osisi apụl). O dekwara akwụkwọ ntuziaka Apple I na nkwekọrịta nkwekọrịta.
Dị ka Jobs na n'ụzọ na-enweghị isi Woz, Wayne rụrụ ọrụ na Atari, tupu mmadụ atọ ahụ amalite ụlọ ọrụ Apple na 1976. Ọrụ wetara ya n'ime ọrụ Apple iji zere ihe mgbochi ọ bụla na ịme ntuli aka na mkpebi Steve, na-anata 10% osisi mgbe e guzobere ụlọ ọrụ ahụ.
Wayne gara n'ihu na-arụ ọrụ na Atari, n'ihi na ọ tụkwasịghị ụlọ ọrụ ọhụrụ ahụ obi nke ukwuu, bụ nke ọ gbara arụkwaghịm ụbọchị iri na otu mgbe ntọala ya, na-ere ahịa ya maka $ 800. Na 1977 ha nyere ya ego nke oma $ 1,700.
2 Apple II na ihe ịga nke ọma
3 Echiche andgha na Eziokwu: Mmalite nke aha Apple na Logo
3.1 Nọmba 0 nke ụlọ ọrụ.
3.2 Ebe a na-adọba ụgbọala n'efu
3.3 Ọ gbanwere ụwa nke kọmputa onwe onye.
3.4 Ọ gbanwere ụwa nke Mgbakọ na mepụtara / iwebata ihe eserese eserese na oke.
3.6 Ọpụpụ nke Steves na Bump nke mere ka Microsoft na IBM (na dakọtara) chịkwaa ahịa ahụ.
3.7 Steve Jobs bụ iGenio ma chekwaa Apple "na - eche echiche dị iche"
3.8 "Post-PC" / iTunes ngwaọrụ.
Wozniak mụtara banyere Bluebox site na edemede dị na Esquire na Ọktọba 1971 nke Ron Rosenbaum dere. Bluebox bụ ngwaọrụ nke mmadụ nwere ike iji sistemụ ekwentị na-eulatingomi ụdaolu ụda nke analog ekwentị gbanwere n'oge ahụ, Wozniak wuru yana Jobs rere Bluebox maka dollar iri ise n'otu nkeji, na-ekewa uru.
Na 1971 Wozniack gwara Jobs maka ebumnuche ya ịme kọmputa maka ojiji nkeonwe yana na 1976 o mere ka ọ dị ndụ. N'oge ahụ, Woz bụ onye ọrụ nke Hewlett Packard ma nwee ọrụ nkwekọrịta iji gosi ụlọ ọrụ ya echiche ya. N'ikpeazụ HP jụrụ ya na ọ ga-abụ obere oge maka Ọrụ iji chee ndị otu ahụ na Mahadum Berkeley, ebe ọ ga-abụ ọganiihu dị egwu.
N'oge na-adịghị anya, ha malitere ịnata obere iwu maka kọmputa nke ha jiri igwe eji aka rụọ onwe ha, mechaa ree ihe dị ka narị abụọ nke igwe ha. Apple m. Ọtụtụ ndị enyi sonyeere ha, mana atụmatụ Apple I pere mpe, yabụ ha malitere ịchọ ego. Na mmechi, Ọrụ zutere Mike Markkula, onye kwetara itinye ego $ 250.000, wee mepụta Eprel 1, 1976, Apple Computer.
Apple II na ihe ịga nke ọma
Maka Wozniak, Apple II ga - abụrịrị kọmpụta ọ gaara achọ iwu ma ọ bụrụ na enweghị nsogbu ego ọ nwere na Apple I. Ọ nwere echiche nke itinye ebe nchekwa vidiyo na kọmpụta iji jikwaa ngosipụta agba, nke otu Ọnọdụ a gụnyere ọtụtụ kaadị mmeba ka ndị ọrụ wee nwee ike ịgbasa ikike nke kọmputa dịka mkpa ha si dị.
Ndị otu a bụ ndị nyere ụlọ ọrụ ahụ ike ego ga-eme ka ọ bụrụ otu n'ime ndị ọkacha mmasị ma buru ndị ọzọ ụzọ.
Ka oge na-aga, ha malitere Apple III na III + bụ ndị ha na Lisa (PC nke ga-abụ etiti n'etiti Apple na Mac) ọdịda ọrụ na akụ na ụba dị egwu.
Otu uru ole na ole Lisa wetara bụ na ịgbaso ndụmọdụ ndị mmadụ dịka Jef Raskin na Bill Atkinson, ọrụ kpebiri ịmekọrịta nkwekọrịta na Xerox PARC gụnyere ileta ụlọ nyocha nke Xerox maka otu nde dollar. edepụtara ya na mgbanwe ngwaahịa. Mgbe nleta a na Disemba 1979, Ọrụ ghọtara na ọdịnihu ga-abụ na igwe nwere njirimara ọrụ njirimara (GUI) na pointer (òké ma ọ bụ òké), nke Xerox mepụtara. Site na ebe a, a mụrụ esemokwu nke ga-adịru afọ ole na ole: IBM PC dakọtara (yabụ anyị na-ekwu maka Microsoft) na Apple Computers.
Echiche andgha na Eziokwu: Mmalite nke aha Apple na Logo
Ọtụtụ na-akpọ aha ụlọ ọrụ ahụ na Ọrụ ebe ọ bụ na nke a bụ, dị ka akụkọ ọdịnala a ma ama na mkpụrụ osisi a bụ ọkacha mmasị ya. Eziokwu Apple ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe omume nke Jobs, n'agbanyeghị agbanyeghị akụkọ ma ọ bụ nke ọma, mana logo bụ akụkọ ọzọ. Nke a bụ ọrụ nke Rob Janoff bụ onye gosipụtara ọtụtụ nsụgharị nke logo ahụ na ezigbo njikọ nke apụl (gụnyere aru). Otu n'ime echiche ndị kacha agbasa bụ na apụl na-ata ata iji sọpụrụ Alan Turing, otu nna nke kọmpụta, onye gburu onwe ya site na iri apụl na-egbu ya na cyanide. N'ezie, ụfọdụ akụkọ ifo ndị mepere emepe na-ekwusi ike na agba nke egwurugwu bụ ụtụ maka mmekọ nwoke na nwoke nke Turing. Agbanyeghị ekwenyebeghị asịrị ndị a. Ihe ọzọ bụ na e mere akara ngosi egwurugwu nke nwoke idina nwoke afọ abụọ mgbe iwebata akara Apple apụl mbụ ma gosipụta agba na usoro dị iche iche ka echiche ikpeazụ a wee yie ka ọ gaghị adị mma.
Nọmba 0 nke ụlọ ọrụ.
Otu n'ime akụkọ ndị a na-ekwu maka ya gbasara ọrụ Jobs maka ịbụ onye ndu na ịbụ onye a ma ama bụ na, ozugbo Apple bidoro itolite, ndị isi ụlọ ọrụ ahụ kpebiri itinye ndị ọrụ ọnụ ọgụgụ. Wozniak natara nọmba 1 na Jobs hapụrụ nọmba 2. Iwe ya bụ na, site na mkpesa, o jisiri ike nye nọmba ahụ 0. Nke a na-egosi ụdị mmadụ na echiche nke Ọrụ, na-agbakọta na njedebe, ịchọ ọdịmma onwe onye nanị na Ngwunye nke ígwè na-enweghị nchịkwa na ụlọ ọrụ ahụ. Nke ikpeazụ na-ekwu n'eziokwu na na mbido Ọrụ ịnwe ọrụ site na Atari rụrụ obere "unyi" na Woz, onye ga-emesị mara.
Ebe a na-adọba ụgbọala n'efu
Omume rụrụ arụ nke ịdọba ụgbọala ebe ọ chọrọ, na-asọpụrụghị iwu ma ọ bụ ihe ịrịba ama, amaara nke ọma. Ha abụghị naanị asịrị, enwere ọtụtụ foto na-egosi ụgbọ ala ọrụ na-eburu oghere maka ndị nwere nkwarụ ma ọ bụ ọbụna oghere abụọ na-adọba ụgbọala. A na-ekwukwa (na nke a bụ asịrị) na mmadụ bịara ịdọrọ akara Mercedes na square nkwarụ ahụ, na-ezo aka n'ụgbọala nke onye isi ụlọ ọrụ Apple, bụ Mercedes SL55 AMG.
Ọ gbanwere ụwa nke kọmputa onwe onye.
Ọ bụ ezie na Steve Jobs kachasị rụọ ọrụ na Apple m na-ere ụfọdụ ibe, echiche nke onye nkịtị nwere ike ịchọrọ iji kọmputa bụ nke ya. Steve Ọrụ Enweghị m ike ime ka ọ bụrụ eziokwu na-enweghị WozniakDị ka a ga - asị na ọ bụghị maka Wozniak, Ọrụ agaghị enwe ngwaahịa iji mee ka ọhụụ ahụ bụrụ eziokwu.
Ọ gbanwere ụwa nke Mgbakọ na mepụtara / iwebata ihe eserese eserese na oke.
N'ikwu eziokwu, ma eserese eserese na oke ahụ bụ teknụzụ arụpụtara site na ọrụ a na-arụ na Palo Alto site na XEROX, na ụlọ nyocha XEROX PARC ya.
Na nkwanye nke Jef Raskin na Bill Atkinson, Ọrụ kpebiri ịkwado nkwekọrịta na Xerox PARC gụnyere ileta ụlọ nyocha nke Xerox maka otu nde dollar nke mbak Apple mgbe edepụtara ya na ngwaahịa mgbanwe. Mgbe nleta a na Disemba 1979, Ọrụ ghọtara na ọdịnihu ga-abụ na igwe nwere njirimara ọrụ njirimara (GUI) na pointer (òké ma ọ bụ òké).
N'ezie, Ọrụ adịghị atụ aro aha "Macintosh." Otu n'ime ndị kere aha ya tụrụ aro aha ahụ: Jef Raskin.
Ọpụpụ nke Steves na Bump nke mere ka Microsoft na IBM (na dakọtara) chịkwaa ahịa ahụ.
N'etiti 80s, onye isi ọrụ ọ chụrụ n'ọrụ chụrụ ya n'ọrụ, Mike Scully ebe ọ bụ na ọrụ enweghị ike ịnwe njikwa zuru oke nke ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe nke a gasịrị, Jobs nwetara The Graphics Group (nke a maara ugbu a dị ka PIXAR) nke bụ enyemaka nke Lucas Films. Na Jenụwarị 24, 2006, mgbe ọtụtụ esemokwu gasịrị, Walt Disney kwupụtara zụta mbak Pixar niile maka ijeri $ 7.400, na-eme Jobs onye nwe oke na Disney, yana oke 7%.
N'ime oge ahụ, ọrụ kpebiri ịmepụta ụlọ ọrụ na-esote Computers mana ọ lekwasịrị anya na atụmatụ ụlọ ọrụ ya na mmepụta nke ngwanrọ, na-agbanwe aha ụlọ ọrụ ahụ na Next Software Inc. Otu n'ime mkpebi kacha dị mma bụ ire ngwá ọrụ NEXT wuru gburugburu Intel 486 na SPARC microprocessors. N'ụzọ dị ịtụnanya, Apple Computer kwupụtara na Disemba 20, 1996 nnweta nke NeXT Software maka nde dollar 400 iji melite sistemụ arụmọrụ nke kọmputa MacintoshMgbe ụlọ ọrụ ahụ dara na Copland, ọrụ na-agwụbeghị. N'ihi ya, Ọrụ laghachiri ịbụ akụkụ nke ụlọ ọrụ Apple. Na ngwụsị 90, Apple fọrọ nke nta ka ọ nwụọ ma ikike Microsoft nwere karịrị. E nwere ụzọ ndị ọzọ dịka Unix na nkwekọrịta, mana ọ ga-arụ ọrụ afọ ole na ole maka GUI nọ na gburugburu ndị a ka enwee ike ịba uru.
Banyere Woz, na 1982 na 1983 ọ kwadoro mbipụta abụọ nke Ememme US, otu oriri na-eme nkwalite nke teknụzụ na ngwakọta nke egwu, kọmputa na telivishọn. Woz hapụrụ Apple nke ọma na February 6, 1985, afọ itoolu mgbe imesịrị ụlọ ọrụ ahụ. Wozniak wee hiwe ụlọ ọrụ ọhụrụ akpọrọ Cloud 9 nke mepụtara njikwa dịpụrụ adịpụ, na-eme njikwa ikuku nke mbụ na ahịa na 1987.
Steve Jobs bụ iGenio ma chekwaa Apple "na - eche echiche dị iche"
Otu ihe kwesiri itinye aka na oru bu iwe ndi mmadu kwesiri maka oru a.
O juru ọtụtụ ndị anya, echiche ịkpọ aha iMac n'ụzọ ahụ na okwu a na-akpọ "Che iche" abụghị echiche 'Ọrụ. kama ọ bụ ọkachamara nke Ken Segall, onye mgbasa ozi. Yabụ na oge ọzọ ị ga-ekwu "Enwere m olileanya na Steve nọ na iCielo", cheta ịkwanyere onye kere ya ugwu ùgwù.
N'otu aka ahụ, usoro mgbanwe nke iMac bụ ibu ọrụ, ọ bụghị Ọrụ, kama Jonathan Ive, onye ama ama ama ama ama, onye na-ahụ maka ị mepụta ngwa Apple niile sitere na iMac na iPod, na iPhone na iPod. iPad.
"Post-PC" / iTunes ngwaọrụ.
Woz na mbido 80s kwadoro mbipụta abụọ nke Ememme US, otu nnọkọ nke na-eme ntoputa nke teknụzụ yana ngwakọta nke egwu, kọmputa, na telivishọn. Ihe ọtụtụ na-eche na Ọrụ tụụrụ ime mana ọ bụ n'ezie ọrụ Woz, ihe dị tupu oge mgbe ọ chọrọ ya.
Ihe ekwesiri ighota bu na oru huru na obu ezie na iMac bu ihe gara nke oma, enwere ihe ndi ozo na-agbanwe (dika o nwere ike ibudata egwu site na intaneti), o kpebiri na oge eruola imeputa ihe tinyekwa ahịa ndị ahụ, ma jikọta teknụzụ dị (dị ka iMac), na teknụzụ ọhụrụ (dịka ịntanetị, mp3, wdg).
Ya mere echiche nke iTunes na iPod mụrụ. Inye iwu (inweta ego na ihe a na-enyo enyo) ọzọ na "egwu egwu egwu", ma n'otu oge ahụ ịwepụta njikọ dị n'etiti kọmputa nkeonwe na egwu dijitalụ, Ọrụ na Apple ga-agbanwekwa otu anyị si ele ihe anya. Nakwa ebe a Jobs na-eme ka echiche ya dabere na ihe dị adị adị na ahịa ma n'ụzọ iwu kwadoro: "Ezigbo Netwọk" ebe mmadụ nwere ike ịnwe disko onwe ya na ọnụ ahịa kwa egwu ma ọ bụ ọba na PC.
PC ga-abụ "ebe iwu" ebe mmadụ ga-enwe ike idezi, nwee ọ andụ ma jikwa foto ha, vidiyo na egwu ha, jikwaa ngwaọrụ ndị metụtara ndị a, dịka iPod (nke na-agba mp3s), kamera dijitalụ na camcorders.
Dịka ị ga-achọpụta, na nyocha nke a dị ntakịrị ma dabere na ọtụtụ isi mmalite anabataghị ọ bụghị site na ndị na-akwado ya, enwere ike ịkọwa ihe ọ bụla:
Ọrụ, ọ bụ ezie na mbido ọ bụ neophyte na moron na ahịa, ka oge na-aga, ọ nụchara ha wee bụrụ ezigbo onye na-ere ahịa bụ onye, ​​n'adịghị ka Microsoft, kwalitere ihe ọ kwadebere, nke na-arụ ọrụ ma dị ezigbo mma.
Banyere teknụzụ, ọrụ jiri ikike nke ndị otu Apple ibe ya, ọkachasị Woz, ebe ọ bụ na enweghị injinia a Apple agaraghị abụ ihe ọ bụ. Ozo bu otutu stereotypes, logos, graphic design, na ndi ozo bu oru ndi mmadu ndi ozo n’agbanyeghi na anara ha ugwo ha, enwetaghi otuto ha kwesiri.
Dị ka Bill Gates, Ọrụ bụ onye ọchụnta ego na-alụ ọgụ ezé na ntu iji nọrọ ma bụrụ onye protagonist, atumatu ya na ụzọ ọ na-arụ ọrụ na-enyo enyo ma o doro anya na ọchịchị Apple ga-abụ maka ezigbo oge na Microsoft ga-edozi nke abụọ ma ọ bụ ikekwe, Apple na-agwụ ya n'ihi na dịka ọ na-emekarị na ndị ọkachamara, ọdịnihu dị na ngagharị nke ngwaọrụ ahụ na Microsoft a abụghị asọmpi maka Apple.
Ma gịnị banyere Linux, dabara nke ọma (maka ọtụtụ na ọ bụghị maka ndị ọzọ) Cannonical ekpebiela ịrụ ọrụ aka na isi ọzọ na ụlọ ọrụ Google (nke anyị ga-ekwu maka ya na ọkwa ọzọ) ihu Apple - Microsoft duo ma nwee oghere ọzọ na-eme dị ka counterweight.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Ndị ọzọ » SSR: Akụkọ banyere apụl
Chaị… (Ọ bụrụ na ọ bụghị WOW, mana WOW)…
Echere m na ọ bụ Ọrụ rụrụ ọrụ ahụ, kedụ aha ọjọọ aha ikpeazụ na-enweghị? ...
Ọfọn, na akụkụ nke Canonical & Google na-enye m ụfọdụ ịkpọasị, mana ma ọ bụ n'ihi uto nke Linux ...
Kedu maka Edgar.
Lee, Cannonical na Google bụ ụlọ ọrụ na-aba uru, ha dị n'ihi na enwere ahịa niche iji jupụta ma ọ bụ were. Apple nwere usoro mechiri emechi kpamkpam na Microsoft na-aga n'otu ụzọ ahụ (ọkachasị na Windows 8) yabụ echeghị m na ha tufuru ohere azụmaahịa enwere ike ịme.
Ekwetaghị m na oge dabara adaba, ị mara, ma ọ bụrụ na ị lelee ma nyochaa isi mmalite dị iche iche dịka akwụkwọ akụkọ na blọọgụ pụrụ iche na mpaghara nke teknụzụ ozi, ihe na-akụ.
Ọ na-esi isi m ịhụ ... (¬_¬) ...
Enwere m olileanya na ha anaghị ere ọkụ, m na-ekwu.
Dị ka Wozniak si kwuo, ọ gaghị ere otu nneboard ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka Ọrụ ...
Kedu maka 3ndriago.
Nke ahụ ziri ezi, duo a na-emeju ibe ha na ogo dị otú a na ọ gaghị abụrịrị na onye na-enweghị nke ọzọ. Mana n'uche nke m, Woz bụ ma ọ bụ ezigbo obi nke ụlọ ọrụ na Jobs ezigbo onye mgbasa ozi (ọ bụ ezie na mbido ọ hapụrụ ọtụtụ ihe ọ ga-achọ, maka ihe atụ ị ga-ahụ vidiyo nkwado Apple II).
Ezigbo ọgụgụ isi isiokwu, amaghị akụkọ n'azụ Apple.
Kedu maka Josh.
Na-nnọọ, echiche nke ikenye isiokwu ndị a bụ nwere a nyochaa nke mmalite (na akụkọ ifo na e kere) nke founders nke ụlọ ọrụ. N'ezie, ọtụtụ na-efu efu mana Apple bụ otu n'ime ha.
Na nzoputa nke Linux bu ihe omuma.
Kedu maka Amaonye.
Lee, amaghị m, mana dịka ị pụrụ ịhụ mmechi nke obodo na usoro mmepe, ubuntu-ekwentị mkpanaaka, ubuntu-TV na njikọ nke Ubuntu na gam akporo, tinyere ihe ndị ọzọ, na-atụ aro ya mana enweghị m ike ikwenye ya dịka N'eziokwu, nke a bụ ihe njiri onwe onye (Ekwetaghị m na ihe ndapụta na ọtụtụ na azụmaahịa a).
Ihe doro m anya bụ na tupu mmechi nke Apple ecosystems na nke na-abịa na Microsoft, a ga-enwerịrị ihe ọzọ ebe ọ bụ na ahịa ahịa na ego nwere ike dị oke nnukwu ịlele.
Ọ dị nro ma e jiri ya tụnyere Microsoft, ị ga-ahụrịrị Pirates nke Silicon Valley nkiri ebe a na-akọ akụkọ banyere ndị mara mma, ma mmalite Apple na Microsoft ... ọ bụ ihe niile ha gụrụ mana na fim.
Kedu maka orbit.
Ọ bụrụ na ị bụ eziokwu, ọ dị ntakịrị ma e jiri ya tụnyere nke m mere na Microsoft na Bill Gates. Apple na ihe niile metụtara ya (CUPS, Darwin, NextOS, wdg) dị ntakịrị karịa nke Microsoft ma ọ bụrụ na anyị atụnyere ya.
Na mgbakwunye, na-enweghị ịgbachitere Apple, Microsoft na-ekwuputakarị ihe ọ na-enweghị ma na-ekwe nkwa ọtụtụ ihe na eziokwu emeela ọkara ma ọ bụ emeghị ya ma tinye ya na ngwugwu ndị ama ama, n'aka nke ọzọ Apple n'ihu ọkwa ọ bụla ma ọ bụ ihe ngosi enweworị ma ọ dịkarịa ala otu ngosipụta nke mepụtara maka ngwaahịa ha.
Ọzọkwa echela na enwere ọtụtụ ihe ịhọrọ site na ohere niile m kpọtụrụ 8 n'ime 10 bụ naanị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otuto otuto maka mbubreyo Maazị Ọrụ.
Mana ọ bụrụ na achọrọ m ịnwa ime ka o doo anya na mgbe ọ laghachiri Ọrụ adịghị ihe ọ bụla ma ọre ere, ndị ọzọ dịka aghụghọ, usoro, logos, aha, wdg. Ha bụ ngwaahịa nke ndị ọzọ ma ewere m na ọ dị mma iji mee ka ha mara, gịnị kpatara ị ji achọpụta, onye ọ bụla na-ele ọrụ anya dịka iGenio na eziokwu ahụ abụghị eziokwu kpamkpam.
Eeh, inwere onwe gi nke oma, anameme ka ihe m kwuru puta ghara ito oru, hehehe echere m na agbaghara m okwu maka "ihe odide mara mma", maka m na dika akwukwo kwuru obi Apple bu Wozniack ma oburu na obu oke amamihe!
I chefuru ikwu na iPod, ngwaọrụ ahụ echekwara n'ezie crApple site na ezigbo enweghị ego, bụ Tony Fadell kere onye mgbe ọ na-ahapụ crApple ga-a swearụ iyi maka ọrụ Steve Jobs na ọ gaghị echepụta ihe ọ bụla ka mma karịa iPod hahaha .
I chefuru igosi na ọrụ ga-arịọ Gates ka ọ tinye ego na crApple, yabụ Microsoft nwere 45% nke ụlọ ọrụ ahụ, n'ezie na-enweghị ikike ikwu okwu, si otú a na-egosi ụjọ nke ọrụ na ya mere enwere ọtụtụ ihe.
Kedu maka Cocolio.
Ọ bụ eziokwu, gbasara okwu gị na Gates tinyere ego na Apple. Banyere pasent m chere na ọ dị ala mana ọbụlagodi yabụ Ọrụ mere ka ọ hụ na o nweghị votu. Banyere iPOD, dịka ihe m nyochara, ọ bụ echiche Jonathan Ive, mana ọ bụrụ na m mehiere, ekele maka ozi ahụ.
N'ezie, na-eweghachi ego Gates, echere m na n'ikpeazụ Apple ga-ejedebe na-eri windo ahụ, n'ihi na njikwa Apple na ịchị ahịa nke ahịa gbasara ngwaọrụ mkpanaka bụ 90% ihe ruru. (dị ka ndị na-eme nnyocha na ndị ọkachamara si) ka itinye aka Microsoft na Windows Phone na Mbadamba ga-emesị bụrụ nsogbu nye ha ebe ọ bụ na ngalaba na mpaghara ndị a bụ Apple na gam akporo (ịghọta Google), ebe m siri ọnwụ na Microsoft abụghị ya bụ asọmpi. Ọ bụ karịa na-emesi obi ike na Cannonical na ya Ubuntu ekwentị bụ ọkachamara n'ike mmụọ nsọ karịa Microsoft n'okwu ndị a.
Hahaha abụghị maka ihe ọ bụla, lee anya na ntanetị ihe Tony Fadell na-eme, Ive bụ mediocre ọzọ nke raara onwe ya nye na-asọ oyi na-asọ oyi, na-agbaso nzọụkwụ nke onye nkuzi ya Jobs, a na-akpọ ọrụ ya Nest.
Banyere obere ụlọ ọrụ mkpụrụ osisi ahụ na-eri Microsoft nwere! ka m chịa ọchị, ọ bụ eziokwu na na Fraịde a mgbe Windows wepụtara anyị ga-ahụ ọtụtụ "ngwa" (kedụ okwu jọgburu onwe ya maka mmemme) na n'oge a adịghị na "Storelọ Ahịa" nke dị mfe, n'ihi na Dị ka enwere ọtụtụ mmemme maka Windows karịa maka OS X, ka anyị kwuo, na karịa ihe niile a bụ sooo ihe na-agbanwe agbanwe karịa desktọọpụ ọ bụla ma ọ bụ ekwentị mkpanaaka OS, ihe, ọ dị nwute, ndị MS amaghị etu esi erigbu oge n'ihi na enweburu Windows CE tupu iwe ahụ a maara dị ka iOS ma ọ bụ gam akporo n'onwe ya, Apple enweghị ụzọ looooong iji gbalịa ịmekọrịta Microsoft otu ihe ahụ na Linux mana na desktọọpụ n'ihi na anyị abụọ maara na Linux bụ eze na sava, ọkachasị ịntanetị. .
Banyere oke 90% nke ihe ụmụaka egwuruegwu Apple, amaghị m ebe ị si nweta ya n'ihi na dịka m matara na ọ bụ gam akporo nwere ọtụtụ ọrụ na ahịa, ọ bụrụ na ị gafere njikọ ahụ, m ga-enwe ekele maka ya, maka ugbu a bụ ihe na-esote m zụta ama bụ Windows 8.
Ọfọn, ekele ma anyị nwere olileanya na ọ ga-ezute gị anya. Ọfọn, banyere obere azụ, ihe na-agaghị ekwe omume n'oge ahụ emeelarị (Borland obere ụlọ ọrụ na-azụta Ashton Tate nnukwu nchekwa data) na onye maara, mana na njedebe oge ahụ ga-agwa,
Ihe m na-agwa gị gbasara ọnọdụ na-ezo aka na mkpesa m na-anwa inweta site na DELOITE bụ ebe a na-enyocha ohere nke ahịa teknụzụ. Ọ bụrụ na-amasị gị, enwere m ike izitere gị otu akwụkwọ ọmụmụ a.
Odi nma na obi oma.
Ọmarịcha, ịnwere ike iziga m akụkọ ahụ, mana na mwepụta nke Windows 8 echere m na omume a ga-agbanwe ọzọ, ma ka anyị kwuo eziokwu, Windows 8 na-enye ihe karịrị akara ngosi mara mma na nke nzuzu dị na iPhone na ihe ha ga-e copyomi na gam akporo .
Na obere azụ ... na gịnị bụ Borland ugbu a? ọ dị m mma olile anya na crApple nwere otu chioma, na ọ na-emechi n'oge na-adịghị anya na ọganihu a abụghị ihe karịrị afụ.
Kedu oke ịkpọasị na ịnya isi na-enweghị isi m na-ahụ na omume a ... ọ na-ewute m ịhụ ka ụdị edemede a na-adọrọ mmasị si bụrụ mmalite maka ọtụtụ okwu ndị na-emebiga ihe ókè. Nzuzo nile dị njọ.
Onye ahụ ekwenyeghị na nkà ihe ọmụma nke Apple, Google, Microsoft, Canonical, Oracle, Exxon Mobile ma ọ bụ ụlọ ọrụ ọ bụla, anaghị akwado ntọala nke rụzuru na onyinye niile nke ụlọ ọrụ ahụ nwere.
Apple dị, dị adị, ọ ga - abụkwa ike na ụlọ ọrụ teknụzụ Ozi, dịka Microsoft, ma ọ masịrị anyị ma ọ bụ na ọ masịghị anyị. Oge ọ bụla anyị na-ekwu maka akụkọ ntolite nke kọmpụta nke onwe dị ka anyị si mara ya taa, anyị ga-ekwurịrị banyere ha ma kwanyere onyinye ha afọ ndị ahụ.
Ferdinand Porsche mere ụgbọ ịnyịnya maka ndị agha Nazi; Adolf Hittler bụ onye ọgụgụ isi nke kere Volkswagen "Beetle"; Tomas Edison mere ka Nikola Tesla banye na ndò ma soro ya gbanwee ugbu a; Henry Ford mepụtara usoro mmepụta ọgbara ọhụụ mana ọ sị, "Ndị ahịa nwere ike ịnwe ụgbọ ala n'ụdị ọbụla ha chọrọ, ọ bụrụhaala na ọ dị oji"; Roy Batty, gam akporo si Blade Runner ("Do Androids Dream of Clockwork Sheep?") Na-azọpụta ndụ nke Rick Deckard, onye nyocha ahụ gbalịrị "ịdọrọ" ya ... ka o wee nwee ike iji abalị ahụ niile na-edepụta omume ọjọọ nke odide nti na nti nke oké villains.
Onweghị ihe dị oji na ọcha.
Naanị asọmpi na-eweta mmepe. Achọrọ m ịnọgide na-ahụ Apple ka ọ na-eto, na Microsoft na-aga n'ihu na azụmahịa, na ụlọ ọrụ dị iche iche na-emepe nkesa GNU / Linux na-eto eto ma bụrụ ndị a ma ama n'etiti ndị ọrụ nkịtị, na Google gara n'ihu mepee ChomeOS ya. Ọtụtụ asọmpi, ya mere nhọrọ ndị ọzọ maka ndị ọrụ, ikike ndị ụlọ ọrụ monopolizing ga-enwe maka ịmepe usoro ha.
A sị ka e kwuwe, ọ bụrụ na ọ bụghị maka adịghị ike MS, ànyị gaara achọ nhọrọ ndị ọzọ?
Ọgba aghara? hahahahaaaaaaa kpọrọ? hahahahahaha kpọrọ, kedụ ọchị ị mere ka m nye, ọ dị nwute na MS nwere ọtụtụ ndị iro yana ọkarịrị njọ na ha nwere CEO kachasị njọ na akụkọ ntolite niile n'ihu ha, ọ bụ ngwụcha zuru oke, oke njọ ha anaghị enyocha ihe nke ọma tupu ha ebido ha n'ahịa n'ihi ịbụ otú a ihe ga-esi dị iche iche, dịka ọmụmaatụ na Windows 98 ọ bụrịrị okwu nke ịme sistemụ arụmọrụ lekwasịrị anya na weebụ, mana ọtụtụ ndị na-eme mkpọtụ megidere ihe na-anaghị eme ugbu a, dịka ọmụmaatụ ya na ChromeOS nke bx ihe nchọgharị jikọtara na eziokwu inet?
Enwere ọtụtụ isi nke ndị nke MS kwesịrị iburu n'uche n'otu ụzọ ahụ dị ka ndị nke Apple nwere obi ụtọ nwere antivirus n'ime OS ha ma ọ nweghị onye na-ekwu ihe ọ bụla, ha nwere Safari, Mail na iTunes arụnyere na ndabara na sistemụ arụmọrụ naanị ya enwere ike iji ya na "kọmpụta" ha (lee okwu hackintosh) ọ nweghị onye na - ekwu ihe ọ bụla mgbe ha na - ebe ákwá n'ihi na Windows nwere ntụgharị, onye ọkpụkpọ mgbasa ozi yana ọbụna machibidoro ya na Europe, ihe nwute na MS enweghị ndị ọka iwu ka mma na ngọpụ dị ka Apple ihe egwuregwu ya.
Ugbu a, echere m na ọ bụ mediocrity nke ụfọdụ ndị mere ka ha chọọ "nhọrọ ndị ọzọ" n'ihi na ha enweghị ike iji ezigbo sistemụ arụmọrụ, ugbu a ana m eji nke ọ bụla n'ime ndị a enweghị nsogbu.
Ekele dịrị gị maka akụkọ a, ọ dị mkpa ịmata ihe kpatara ihe anyị nwere taa ... mana maka mkpụrụ osisi m gaara ahọrọ ube oyibo (ube oyibo ma ọ bụ ọgwụgwọ) ... hehehe
Apple anaghị achịkwa ahịa maka kọmputa nkeonwe. Microsoft ka bụ onye ọchịchị aka ike ụwa. Apple bụ posh na dị egwu nwanne nke Microsoft. Na ahịa ndị ọzọ ọ jisiri ike guzosie ike ma na desktọọpụ ọ ka bụ onye na-akwado ihe nkiri.
Ekwesighi ịtụkwasị obi n'ọrụ, ọ ghọgburu Steve ọzọ ọtụtụ oge (onye ya na ya biri ogologo oge). O nwere agwa a na-apụghị ịnagide, ọ na-achọ ọdịmma onwe ya nanị ma na-eche nanị banyere onwe ya. Ọ bụrụ na nwoke ahụ kwesịrị iCielo, enwere m olileanya na nke a dị ka Windows Me.
Kedu maka Windóusico.
Ọ bụrụ n ’ịwepụ ha n’ogologo, MS ka bụ onye nwere isi arụnyere, mana enwere obere nkọwa na nke ahụ bụ na Apple bụ ahịa mechiri emechi ma nwee njikwa zuru oke na gburugburu ya (PC, Music, Telephony and Mbadamba) na ụdị okike a bụ nke Microsoft na-anwa i emomi. Dabere na ọkwa, ndị ọkachamara na isi mmalite sitere na Microsoft n'onwe ya, ha ga-amalite imechi usoro okike na ngwaọrụ ARM, Ekwentị na Mbadamba; a ga-ahapụ PC ahụ obere mepee (otu Apple). E kwesịkwara icheta na Apple na Microsoft bụ ndị ọchụnta ego azụmaahịa ebe ha nwere ngwugwu ha gbanwere site na nkwekọrịta. Microsoft naanị nwere otu niche ebe Apple abanyeghi igwu egwu ma ọ bụ nke egwuregwu egwuregwu vidiyo, mana dịka m si hụ ya, maka ọnụahịa, mma na akụrụngwa maka inweta akụrụngwa, Apple ga-amalite iri nri n'akụkụ ya windo. Ọ bụ ezie na ọ dị ntakịrị karịa, ọ nwere ike ịbụ na n'oge na-adịghị anya, Apple na MS kpebiri ịrụ ọrụ ọnụ na onye maara ma eleghị anya obere azụ na-eri granda (nke a emeworị).
kpam kpam na-ekwenye na Cocolio… Enwere Linux distros na-eweta firefox dị ka ndabere nchọgharị, ọ dịghị .. apple na-eweta ọtụtụ puku ngwa na sistemụ arụmọrụ ya na ndabara ma ha na-eme ngagharị iwe na MS nwere ntụgharị .. site na Chineke… ịkwụsị ịbụ onye na-anụ ọkụ n'obi… anwala itinye ya na isi ndị mmadụ na Linux bụ OS kacha dịrị nchebe, nke kachasị nwee ike, wdg ... ka ndị mmadụ hụ, dọkụmentị, nnwale ma anyị ga-ahụ otu ụzọ ndị ọzọ dị iche iche nke SL ga-esi na-aga n'ihu na onye ikpeazu.
Ihe ị ga - eme mgbe ị wụnye Ubuntu 12.10 Quantal Quetzal
Na-agbanwe ọnọdụ nke profaịlụ Thunderbird na folda ya